၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး၌ တရားမဝင် သစ်တန်ချိန် ၉ဝဝဝ ကျော်နှင့် တရားခံ ၁ဝဝဝေ?? - Yangon Media Group
၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး၌ တရားမဝင် သစ်တန်ချိန် ၉ဝဝဝ ကျော်နှင့် တရားခံ ၁ဝဝဝေ??
မုံရွာ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၂
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး သစ်တောဦးစီးဌာနမှ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွင်း တရားမဝင် သစ်တန်ချိန် ၉ဝဝဝ ကျော်နှင့် သစ်ခိုးထုတ်သယ်ဆောင်သော တရားခံ ၁ဝဝဝ ကျော်ကို စံချိန်တင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ တရားမဝင်သစ်ဖမ်းဆီးရာတွင် ကျွန်းသစ်၊ သစ်မာနှင့် အခြားခွင့်မ ပြုထားသောသစ်လုံးများ၊ ခွဲသား များ ၉၂၂၂ တန်ကျော် ဖမ်းဆီးမိခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
”သစ်တောဌာနကနေ တရားမဝင် သစ်သယ်ဆောင်မှုတွေကို ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ကြားသိရင် သတင်း ပေးတိုင်ကြားနိုင်ဖို့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို မြို့နယ်တွေမှာ ဖြန့်ဝေကြေညာခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့် ပိုပြီးထိထိရောက် ရောက် ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းထဲက ခရိုင်ကိုးခုမှာ သစ်တောဧရိယာအများဆုံးတည်ရှိတဲ့ ကသာခရိုင်ထဲက ဖမ်းဆီးမှုအများဆုံးပဲ၊ မိုးရာသီဆို ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းအတိုင်း စစ်ဆေးရေးလုပ်ပြီး တရားမဝင်သယ်ဆောင်လာတဲ့သစ်ဖောင် တွေကိုဖမ်းတယ်၊ လာမယ့်နှစ်မှာလည်း အရှိန်မြှင့်ဖမ်းသွားမယ်” ဟု စစ်ကိုင်းတိုင်းသစ်တောဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
တရားမဝင် သစ်တန်ချိန် ၁ဝဝဝ ကျော်ထိ အများဆုံးဖမ်းဆီး မိခဲ့သော ကသာခရိုင်သည် ကချင် ပြည်နယ်နယ်စပ်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် အဓိကလမ်းကြောင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ တရားမဝင်ဖမ်းဆီးရာ၌ သယ်ဆောင်သူတရားခံ ၁ဝဝ၇ ဦး၊ သယ်ဆောင်ရာတွင် အသုံးပြု သော ကား ၅ဝ၄ စီး၊ လယ်ထွန် စက် ၂၈ စီး၊ ထော်လာဂျီ ၂၈ စီး၊ ဆိုင်ကယ် ၁၅၁ စီး၊ သုံးဘီးဆိုင် ကယ်ခုနစ်စီး၊ စက်လှေ၊ မော်တော် ၈၃ စီး၊ ဆိုက်တွဲ ၃၃ စီး၊ တူမီး သေနတ်ငါးလက်၊ သစ်ခွဲစက် ၂၆ဝ လုံး၊ ချိန်းဆော ၁၁၄ ခုကို သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အလောင်းတော် ကဿပ ဘုရားဖူး လမ်းမပေါ်ရှိ ပုထိုးလုံး ချောင်းကိုဖြတ်၍ ကြိုးတံတား တစ်စင်းကို တစ်လ?
နှစ်နိုင်ငံ ယဉ်ကျေးမှု ဖလှယ်ရေးကို အဓိကထားဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု မြန်မာ – တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု အသင်း ဆ
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကုန်းရေ နှစ်ထွေ သွား လေယာဉ် အောင်မြင်စွာ တရုတ် စမ်းသပ် ပျံသန်း